Madaxweyne Lafta-gareen oo maanta lagu caleema saarayo Baydhabo – Kalfadhi
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Qaban qaabada Xafladda caleema saarka Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maanta ka socoto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Xubno isugu jira masuuliyiinta maamul Goboleedyada iyo kuwa Dowladda dhexe ayaa ka qeyb galaya Xafladda caleema saarka oo maalmihii ugu dambeeyay qaban-qaabadeeda laga dareemayay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed.
Af-hayeenka maamulka Koonfur Nuuradiin Abuukar Gacma ayaa Kalfadhi u sheegay in Xafladda lagu casuumay masuuliiyin ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwa maamul Goboleedyada iyo Wafuud ka socota dalalka daneeya Soomaaliya iyo beesha Caalamka.
“Muddo ayaa wadnay qaban qaabada Xafladaan waxaana rajeynaynaa iney dhici doonto Xaflad aad u qurux badan, waxaana ka qeyb galaya Guddoonka Golaha Shacabka, Aqalka Sare, kuwa maamul Goboleedyada iyo Safiiro”, ayuu Kalfadhi u sheegay Af-hayeenka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa aad loo aadkeeyay waxaana madaxda imaaneysa Baydhaba loo diyaariyay Hoteelo ku yaala Bartamaha magaalada. Guddiga qaban qaabada Xafladda Caleema saarka oo isugu jira Xildhibaano iyo Wasiiro ayaa Kalfadhi u sheegay in maanta ay si rasmi ah u dhici doonto Xafladda.
“Ilaa hadda xaaladda waa caadi, wax dhib ah oo dhinaca ammaanka ah ma jiro, Ciidamada Booliiska iyo kuwa Nabad Sugidda ayaa ku sugan Koonaha magaalada iyo gudaheeda”, ayuu markale u sheegay Kalfadhi Nuuradiin Abuukar Gacma.
Xafladda caleema saarka kadib ayaa lagu wadaa in Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen uu soo dhiso Golahiisa Wasiirada. Wararka qaar ayaa sheegaya in todobaadkaan lagu dhawaaqi doono liiska Golaha Wasiirada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.